Guardiola oo diyaar u ah inuu dagaal la galo Real Madrid iyo Barcelona, sababa la xiriira saxiixa bedelka Aguero – Gool FM
(Manchester) 16 Okt 2019.Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa dagaal xoogan la gali doono kooxaha Barcelona iyo Real Madrid, si uu ula saxiixdo bedelka xiddiga reer Argentina ee Sergio Aguero.
Guardiola ayaa raadinaya inuu la soo wareego weeraryahan cusub si uu ugu noqdo bedel Sergio Aguero, sida ay warineyso shabakada caanka ah “CalcioMercato” ee dalka Talyaaniga, wuxuuna isha ku hayaa xiddig kale ee reer Argantina ah, waana weeraryahaka kooxda Inter Milan ee Lautaro Martínez.
Aguero ayaa noqon doona 32 jir xilli ciyaareedka soo socda, waxaana qandaraaskiisa uga harsan kaliya hal sanno, sidaas darteed Pepe Guardiola ayaa wuxuu bilaabay raadinta weeraryahan cusub wuxuuna u arkaa Lautaro Martínez inuu yahay xiddiga kaliya awoodi kara inuu hogaamiyo weerarka kooxdiisa Sky blue mustaqbalka dhow.
Lautaro Martínez ayaa ka sameynaya qaab ciyaareed wanaagsan kooxda Nerazzurri xilli ciyaareedkaan, taasoo ka dhigtay inuu bar-tilmaameed buuxa u noqdo Barçelona si ay kaga dhigato bedelka Luis Suarez iyo Real Madrid oo dooneysa inuu u noqdo bedelka Karim Benzema.
Laakiin wax sahlan uma noqon doonto Pep Guardiola iyo ragiisa inay gacanta ku dhigaan saxiixa Lautaro Martínez, maadaama ay Inter Milan gaarsiisay qiimaha lagu kansali karo heshiiskiisa kooxda qiimo dhan 111 milyan euro, si ay si toos ah u bixiso koox kasta ee dooneysa inay dhameystirto heshiiskiisa.
Kooxda Real Madrid oo u dhaqaaqeysa daafac ka tirsan Paris Saint-Germain... (Meeqa milyan oo gini ayay ku doonaysaa?)